Ahlonyiswe ngolwazi amakomiti ezigceme eMandeni | News24
Ahlonyiswe ngolwazi amakomiti ezigceme eMandeni
UMkhandlu kamasipala waseMandeni ngaphansi kobuholi bukaMeya Sphesihle Zulu ubenohlelo lokuhlinzeka nokuwacijwa kwamalunga amaKomiti ezigceme phecelezi (ward committees) ngolwazi olumayelana nezokuhanjiswa kwezidingongqangi kubantu nokuyisehlakalo esenzeke kusukela ngoMsombuluko wangomhlazingama 20 kuyakuLwesine lwangomhla zingama 23 kuLwezi nonyaka eSibusisiwe Hall eMandeni.
Ethula inkulumo yakhe yokuvala loluqeqesho uSomlomo woMkhandlu uMakhosazana Zungu nebihambisana nokunikezelwa kwezitifiketi kumalunga amaKomiti ezigceme ubonge wonke amalunga amaKomiti ezigceme abeyingxenye yaloluqeqesho kusukela luqala luze lufike ekupheleni, uphinde wadlulisa ukubonga kulabo ebebeqeqesha amalunga amaKomiti ezigceme abaziwa ngeMageza Project Management wathi uyethemba ukuthi kuningi okuzuzwe amaKomiti ezigceme kuloluqeqesho.
“Ukuhlonyiswa nokucijwa ngolwazi kwamaKomiti ezigceme kubaluleke kakhulu futhi kwenza umsebenzi woMkhandlu wokushintshwa kwezimpilo zabantu ubelula njengoba amalunga amaKomiti ezigceme kuyiwona ahlala emiphakathini kanti siyawagqugquzela ukuba azibandakanye nemihlangano yentuthuko edidiyelwe ngaso sonke isikhathi” usho kanje. Enkulumeni yakhe uSomlomo uphinde wabonga bonke labo abadlale indima enkulu ekutheni loluqeqesho lubeyimpumelelo, uphinde wathi ukucijwa kwamaKomiti ezigceme kuzoba wusizo olukhulu futhi kuzonciphisa nemibhikisho emiphakathi njengoba bemiselwe ukudlulisela izidingo zomphakathi eMkhandlwini.
Esephetha uthe uqeqesho olufuze lolu aluzukugcina kodwa luzoqhubeka njengoba amalunga amaKomiti ezigceme besazosebenza nawo iminyaka emihlanu bewuMkhandlu.